Oxygen Concentrator Machines Donation – We Help and Care
Oxygen Concentrator Machines Donation
12. August 2021 28. December 2021 / By admin
Oxygen Concentrator လှူဒါန်းခြင်း
(အောက်တွင် မြန်မာလို ဖတ်ရှုရန် & English Below)
We Help and Care Organization (WHC) hat4Sauerstoffkonzentratoren im Wert von 7.400.000 Myanmar Kyats (ca. 4352 €) gespendet, die für die Reduzierung der Zahl der Covid-19-Patienten und die Prävention notwendig sind.
Wir sind allen Spendern dankbar, die unsere Projekte auch nur mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Wir brauchen Ihre Hilfe, damit wir uns weiterhin um die Bedürftigen kümmern können!
Um unsere Projekte zu unterstützen, spenden Sie bitte direkt auf dieser Website
WHC Offizielle Website;
ကျွန်ုပ်တို့ We Help and Care အဖွဲ့မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်များတွင် Covid-19 လူနာ လျော့ချနိုင်ရေးနှင့်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော Oxygen Concentrator ၄လုံး (တန်ဖိုး ၇၄ သိန်းခန့်)အား တယ်လီကျန်းမာသို့ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြုရသော ကောင်းမှုကုသိုလ်များကြောင့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများ အားလုံး ဘေးအန္တရာယ်အသွယ်သွယ်မှ လွတ်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေလို့ ကျွန်ုပ်တို့ WHC မှ ဆုမွန်တောင်းအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ယခုကဲ့သို့ လှူဒါန်းနိုင်ရန် အလှူငွေများဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော အလှူဒါနရှင် အပေါင်းကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်း နှင့် ယခုလှူဒါန်းသည်ထက် ပိုမို လှူဒါန်း ကုသိုလ်ပြုနိုင်ကြပါစေရန် မေတ္တာပို့သ ဆုတောင်းပေးအပ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ အကူအညီ လိုအပ်နေသူများကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းကို အလှူငွေထည့်ဝင်ခြင်းအားဖြင့် တတ်အားသမျှ ကုသိုလ်ပါဝင်ပေးကြဖို့ လေးစားစွာ တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
We Help and Care Organization (WHC) has donated4Oxygen Concentrators worth 7,400,000 Myanmar Kyats ( approximately €4352 ) which is necessary for the reduction of Covid-19 patients and prevention.
We are grateful for all the donors who aid in our projects by contributing evenalittle. We need your help so that we can keep caring for the ones in need!
To support our projects, please donate directly under this website
WHC Official Website; https://www.wehelpandcare.org/donate/